တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို မေှးမှိန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံအား တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် နှင့် တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ရန် နှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ မှေးမှိန်စေခြင်း နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖယ်ရှားခြင်း လုပ်ဆောင်နေမှုတို့ကို ရပ်တန့်ရန် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက မကြာသေးမီက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price ၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် မေ ၂၃ ရက်တွင် အထက်ပါအတိုင်း တုန့်ပြန်ပြောကြားလိုက်သည်။လူမှုကွန်ရက်ပိုစ့်တစ်ခုတွင် Price က တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်မူဝါဒကို မှားယွင်းစွာ ဆက်လက်ဖော်ပြနေကြောင်း နှင့် “ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေ” ဟုခေါ်ဆိုသော ပူးတွဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သုံးရပ် နှင့် အာမခံချက် ၆ ချက်ဖြင့် လမ်းညွှန်ထားသည့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ ဆိုင်ရာ နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်အပေါ် ၎င်း၏ ကာလရှည်ကြာစွာ ရပ်တည်ချက်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆက်လက်ကတိပြုထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက Price ၏ ရေးသားချက်မှာ အချက်အလက်များ နှင့်သမိုင်းမှန် ကို ပုံဖျက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းသည် တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတွင် အလွန်အရေးကြီးပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်မေးခွန်း၏ အရေးအကြီးဆုံး အဓိကသော့ချက်မှာ “တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိပြီး ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့သည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် တရားဝင်အစိုးရဖြစ်သည်။
“ ဒါဟာ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒရဲ့ အဓိကယူဆချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက် နဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေသ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်” ဟုဝမ်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၁ နိုင်ငံသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အခြေခံမူဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ သံတမန်ဆက်ဆံရေးများ ထူထောင်ထားကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းသည် တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရန် အကြီးမားဆုံးအဟန့်အတားဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို တရုတ်နိုင်ငံက ခိုင်ခိုင်မာမာစွဲကိုင်ထားသလို ယင်းကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု သို့မဟုတ် အပေးအယူလုပ်မှုမျိုးကိုမှ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဝမ်ကဆိုသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိသည်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းအပါအဝင် ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံမူအသစ်များကို ကျင့်သုံးသွားမည်ဟု ထပ်လောင်းကတိပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မည်သည့် “ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး” လှုပ်ရှားမှုကိုမျှ ထောက်ခံအားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကတိပြုခဲ့သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး “ ရေလက်ကြားတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုးအားလုံးအနေနဲ့ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိတာ နဲ့ ထိုင်ဝမ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တာကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီတည်ရှိမှုကို စောဒကတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အထက်ပါကတိကဝတ်များသည် တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တိုးတက်စေရန် ရှေ့ရှုသည့် အစပြုမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်က သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ချိန်၌ တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက “ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည်သာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း ” နှင့် “ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိပြီး ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း” ဟူ၍ ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပူးတွဲ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံက “ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ နဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ချိုးဖောက်ရန် သို့မဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် သို့မဟုတ် “ တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် “ တရုတ်တစ်နိုင်ငံ , ထိုင်ဝမ်တစ်နိုင်ငံ” ဖော်ဆောင်ရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။”
“ အဲဒီကတိကဝတ်တွေဟာ အားလုံးရှုမြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ သူတို့က သိပ်ကို ကြည်လင် ရှင်းလင်းပါတယ်။ စာချုပ်စာတမ်းပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတာပါ။ အဲဒီသမိုင်းဝင် အချက်အလက်တွေကို ပစ်ပယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပြင်းပယ်ဖို့ လုပ်လို့မရဘူး။” ဟုဝမ်က ဆိုသည်။သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ နှင့် တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သုံးရပ်ကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းရန် သစ္စာရှိစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်က ထိုင်ဝမ်နှင့် တရားဝင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြောင်း ၊ အမေရိကန်-ထိုင်ဝမ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုသည် ပို၍ တိုးတိုးလာခဲ့ကြောင်း နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ထိုင်ဝမ်အား “ နိုင်ငံတကာကစားကွင်း”လိုနေရာမျိုးတွင် တိုးချဲ့ဝင်ဆံ့နိုင်ရန် ကူညီဖေးမမှုများပင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်နှစ်များတွင် အမေရိကန်သည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို မှေးမှိန်အောင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖယ်ရှားအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုပင်ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ တရုတ်နိုင်ငံက မည်သည့်အခါမျှ အသိအမှတ်မပြုဘဲ အစဉ်တစ်စိုက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံက ၎င်း၏ တစ်ဖက်သတ်-စုစည်းထားသည့်ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေ နှင့် အာမခံချက် ၆ ချက်တို့အပါအဝင်တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒအား ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရန် ပိုမိုပုံဖော်သည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးသည် နိုင်ငံ-နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးအဆင့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အနေဖြင့် တစ်ဖက်သတ် မူဝါဒဆိုင်ရာစုစည်းမှုများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစား နှစ်ဖက်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်မှုဖြင့်သာ လမ်းညွှန်ထိန်းကြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်မူဝါဒကို လွဲမှားစွာ ဖော်ကျူးနေခြင်းမဟုတ်သည်ကို အချက်အလက်ဖြင့်ပြောဆိုရန်မှာ ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပေ။ တရုတ်နိုင်ငံအားထိန်းချုပ်ရန် “ထိုင်ဝမ်ကတ်” ဖြင့် အသုံးပြုကစားခြင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် ၎င်း၏ မူလရပ်တည်ချက် နှင့် နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက် ၊
၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ကတိကဝတ်များ အပေါ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက အဆက်မပြတ် ဆန့်ကျင်ပြုမူခဲ့ကြောင်း ဝမ်ကဆိုသည်။
တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းအခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် “တရုတ်တစ်နိုင်ငံ ” ဆိုသည့် တရုတ်-တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ နှစ်ရပ်စလုံးသည် အနှစ်ချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး
ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မီးမောင်းထိုးခဲ့သည်။သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ တရုတ် နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့သည် သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန် နှင့် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း၍ ရမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးသာ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားပြည်လည်ပေါင်းစည်းရေးသည် တရုတ်နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ဘုံသဘောထားဆန္ဒဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အခြာအာဏာ နှင့် လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားရန် သန္နိဌာန်ချထားသည်။
“ ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းအပေါ် တစ်လက်မတောင်အလျှော့မပေးနိုင်သလို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက် လည်း လုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟုဝမ်က ဆိုသည်။
“ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ကို အမေရိကန်က လိုက်နာဖို့နဲ့ တရုတ်-အမေရိကန်ပူးတွဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သုံးရပ်ကို သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ဖို့ ၊ ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေးကို ထောက်ခံအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ မှတ်ချက်စကားအရ မူလအစနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တဲ့ “တရုတ်တစ်နိုင်ငံ” ထဲ ဆီပြန်လာဖို့ နဲ့ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းစည်းမျဉ်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖယ်ရှားမှုလုပ်နေတာကို ရပ်တန့်ဖို့ ၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့ ၊ ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုတွေကိုမြှောက်ထိုးပင့်ကောင်လုပ်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့ နဲ့ တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပျက်ပြားစေမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကို ရှောင်ရှားဖို့ နဲ့ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ် ” ဟု၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
( English Version Version)
BEIJING, May 24 (Xinhua) — The United States should abide by the one-China principle and stipulations in the three China-U.S. joint communiques, and stop obscuring and hollowing out the one-China principle, Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said on Monday in response to recent remarks by U.S. State Department Spokesperson Ned Price.
Inasocial media post, Price said that China continues to misrepresent U.S. policy, and that the United States remains committed to its longstanding, bipartisan one-China policy, guided by the so-called “Taiwan Relations Act,” Three Joint Communiques, and Six Assurances.
Wang said that Price’s comments areadistortion of facts and history.
The Taiwan question is the most important and sensitive issue in China-U.S. relations. The core of the Taiwan question is “one China.” There is but one China in the world, Taiwan isapart of China, and the government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing the whole of China.
“This is the core concept of the one-China principle, which has become the consensus of the international community and the basic norm governing international relations,” Wang said.
In history, the Taiwan question was the biggest obstacle to the normalization of China-U.S. relations. That’s because China firmly adhered to the one-China principle and would never make any compromises or concessions on this issue, Wang said.
In 1971, the United States affirmed to China that it would pursue new principles with regard to the Taiwan question, which include: the United States would acknowledge that there is only one China in the world and Taiwan isapart of China, and the U.S. side would not support any “Taiwan independence” movement, the spokesperson said.
In the Shanghai Communique released in 1972, the U.S. side declared that “the United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan isapart of China. The United States Government does not challenge that position.”
In the China-U.S. joint communique on the establishment of diplomatic relations released in 1978, the United States “recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China” and “acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.”
In the August 17 Communique released in 1982, the United States “reiterates that it has no intention of infringing on Chinese sovereignty and territorial integrity, or interfering in China’s internal affairs, or pursuingapolicy of ‘two Chinas’ or ‘one China, one Taiwan’.”
“These commitments are there for all to see. They are crystal clear and inked in the documents. Such historical facts cannot be wiped off or denied,” Wang said.
He added that the U.S. side has significantly eased restrictions on official exchanges with Taiwan, the U.S.-Taiwan military interactions have become more frequent and overt, and the United States even helps Taiwan expand its so-called “international space.”
It is not difficult to tell from the fact that China is not misrepresenting the U.S. policy. It is the U.S. that has been constantly reneging on its own commitments, the consensus of the two sides, and its original position, in order to undermine the peace and stability across the Taiwan Strait and play the “Taiwan card” to contain China, Wang said.
He pointed out that the essence of both the one-China principle and the one-China policy is about “one China,” which is the political consensus reached by China and the United States. Without the consensus, China and the United States could not have engaged with each other, established diplomatic ties, and developed bilateral relations.
The Taiwan question is purely China’s internal affair, and realizing complete national reunification is the common aspiration of all Chinese people. China is determined to safeguard its own sovereignty and security interests.
“There is zero room for compromise and not an inch to give on the Taiwan question,” Wang said.
“We urge the U.S. side to abide by the one-China principle and stipulations in the three China-U.S. joint communiques, return to the original and true meaning of ‘one-China’, follow through on President Biden’s remarks of not supporting ‘Taiwan independence’, stop hollowing out the one-China principle, stop seeking to contain China with Taiwan-related issues, stop emboldening ‘Taiwan independence’ separatist forces, and avoid causing severe damage to China-U.S. relations and peace and stability across the Taiwan Strait,” he said.